Utilization and Disposal of Information
Safety Standard of Information
Application and Alteration of your information
To be in communication with MyanPay
Notification for Alteration
This policy will be edited again on suggestion of our customers and addition of new information in the service of MyanPay. Accordingly, previous information of yours collected by us will be applied for the time being or not, it has right to be selected. For any alteration, confirmation only under email from you will come into effect. In case you close MyanPay account, notice of policy amendment will not be obtained. Additionally, your private data and information will not be applied. Private Policy will significantly be uploaded in the amended website and we will observe and keep watch always the disposal to other people on way of application of this information and mode of acquiring of it. For the time being, our private policy may always be examined at any time in the MyanPay website at www.myanpay.com.mm .
Desirable particulars to open MyanPay account, your name, your NRC No (or) Passport., your address, your mobile phone number and your email address shall be given. We will question on your safety standard (for instance, what was your favorite sport in High School). In the event of forgetting or losing your password for systematic performance for us or emergence of requirement of the disposal of your account and issuance of new password, the questions are essential for communication with you.
For shopping or service payment from the internet, using MyanPay, we will interrogate on necessary particulars for each transaction (MyanPay username and password). We will also confirm by your Pin Code (or) One time password OTP by Email or Mobile SMS for each transaction. These particulars of individual transaction will be acquired through MyanPay by us in order to observe on legality and procedure, your internet addresses (IP Address) or MyanPay account to be used, your application of track will be acquired.
Information of Surfing Website
Access in MyanPay website, we will automatically known web addresses to be observed or to have been observed in view of Worldwide Web Communication. We may surf any pages in pursuance of MyanPay website, any browser assortment can be applied. The duration of time to be spent can be scrutinized. In order to know the appreciation of our customers and to enhance the attitude regarding our service and MyanPay customer, this information will be used. We are not making inquiry the surf prior to access of MyanPay website or hereinafter.
In case of returning to MyanPay website by using same computer and browser, in order to recognize MyanPay customer, the data we send to your computer and their files are known as cookies. Typing email address and password and access of MyanPay account, then session cookie will be sent to your computer. In pursuance of surfing so many pages in our website at the same time, these cookies will make you remember and so there is no need to type considerably your password. In the event of sign out or shutting down the browser, accomplishment will be without any effect in these cookies. Lasting cookies are used to display your email address in Sign-in form. For so doing, there is no need to type again email address every time the access of your MyanPay account. Further, our cookies are used again in the performance of added transaction. In view of confidentiality of our cookies files, other particulars can be interpreted from your email address of only MyanPay. Cookies information will be distributed to merely sure user of legalized MyanPay nomination.
In the event of send your emails or faxes, information will be taken from your account record. Customer service and other correspondence affairs will be perform with you through only MyanPay. We keep these records as the rate of customer service and to make effort of progress and possibility of cheating and examination of violation of approval of the user, it is maintained.
Questionnaires Surveys and Profile Data
The nutshell review and questionnaires aiming and selecting will be made to enumerate the data of the census and the concentration and requirement of the users. The application and review of the collected data will be stated in details. In the event of wishing to enumerate the census and private data of the users, collecting will be on only letting the users know initially.
3.	Utilization and Disposal of Information
The particulars of our collection are used as the following order-
1)	To provide services of performances of your work;
2)	To provide customer service
3)	To review your capability and accept of demanding of special features or product;
4)	Use to enhance our product and service; “Our users’ personal particulars are given only to the staff working for them”
Disposal of MyanPay Customers and Third parties
In case you apply MyanPay aiming for e-commerce, website address (URL) you have given and the information of service will be shown to MyanPay customers. However, your bank account number and other financial data giving and taking of finance through MyanPay shall not be known to anyone. In the event of requirements of compliance of legal affairs or summon, we will dispose exceptionally.
MyanPay never sell or hire your private information to other people. MyanPay never allot and use your private information with other people apart from the following restriction and condition or the above-cited situation of MyanPay customers or your permission. In trading the enumerated particulars to the companies paying services of buying and selling on behalf of us and disposal is made to related financial institution. Apart from your approval or other application, or related products, these companies are the prohibition of utilization of information and confidentiality. In the investigation of cheating or other legalized performances, if it is believed to contribute and is desirable to do so or make inquiry of violation of agreement of utilization, information will be disposed. Mainly speaking, in the event of finding of cheating, the particulars of the cheater (bank account or bank card excluded) will be given to the requested users. Law related letter of order like summon, we will mention information. The information will be disposed your representative or legal representative.
Our communication with MyanPay customers
To meet our requested services, communication is made with the users by applying regular way of email and also phone is used to deal with the dissatisfaction of the customer or transaction of suspect of investigation. Your email is used to confirm opening MyanPay account and giving and taking of finance through MyanPay, sending notice, dispatching the alteration of importance regarding product and services and warning letter and other necessary disposal under the law. Generally speaking, the users has no right to choose the transaction of this communication, but they have right to accept the information, not to reproduce about it.
IP address, browser types and access times are used for analysis of tracks, management of site, enhancement of capability and collective utilization of information of the multi social factors.
4.	Safety Standard of Information
MyanPay undertake for the preservation of customer particulars under the advance safety standard. Even the employees desirable of paying particulars of services are restricted tightly using of the private particulars. We treat safety standard of every aspect and your private data securely. We always inspect the system of safety standard of us and make agreement to examine our security system with other companies. For further information of detail regarding MyanPay security performances, do get to MyanPay security center. The security of your MyanPay account depends on your protection of MyanPay password. You are seriously prohibited not to use sharing with anyone of MyanPay password. The responsible person of MyanPay never gives your password to you. That is why, any email or communication ways and means demand your password is unofficial. Due to any reason, in the event of sharing and using MyanPay password with another one (inclusive of commitment of paying services as account aggregature), your account and private particulars can be acquired. Then, if any action of using password, it is your responsibility only and in the event of someone is deemed to be using your password, your profile setting and password are to be changed to immediate access to your account in the https://www.myanpay.com.mm Do communicate with us abruptly.
5.	Application and Alteration of your information
The particulars you have given can be examined again and such particulars or settings of MyanPay account can be altered. At any time, MyanPay website makes access to your account and change through profile page and your account can be closed with the communication of the service of our customers. If it is closed, the account will be recorded in our database but the information of your account will be maintained in our database in order to avoid investigation of cheater and it is necessary to protect to open new account on closing old one. However, in the event of closing your account, apart from requirement and cheating protection, your private particulars will not be used at anytime.
6.	To be in communication with MyanPay
As regards this privacy statement or user agreement, in the event of having to interrogate anything, contact with the phone number of MyanPay ( 09774817771, 09774817772 ), privacy@myanpay.com.mm or through Contact Us page and by sending email to us.
1. အဖွင့် နိဒါန်း။
2. သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်း။
3. သတင်းအချက်အလက်များအသုံးပြုခြင်း နှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်း။
4. သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေး။
5. သင်၏သတင်းအချက်အလက်များ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲခြင်း။
6. MyanPay နှင့်ဆက်သွယ်ရန်။
1.	အဖွင့် နိဒါန်း
အပြောင်းအလဲများ အတွက် အသိပေးကြေငြာခြင်း
2. သတင်းအချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်း
MyanPay account ဖွင့်ရန်အတွက် သင်၏အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ် (သို့) Passport နံပါတ်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် e-mail လိပ်စာတို့ကို ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့က သင်အား သင်၏ လုံခြုရေးနှင့်ဆိုင်သော မေးခွန်းတစ်ခု (ဥပမာ။ ။ What was your favorite sport in high school?) ကိုလည်း မေးမြန်းမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့မှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် လုပ်ငန်းများကို အစီစဉ်တကျလုပ်ဆောင်ရန်၊ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် သင်၏ password အား မေ့လျော့ ခြင်း သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် password အသစ်ထုတ်ပေးရန် နှင့် သင်၏ account စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် လိုအပ်ချက် များပေါ်ပေါက်လာပါက သင့်အား ဆက်သွယ်ရန်တို့တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လှသော မေးခွန်းများဖြစ်ပေသည်။
အကယ်၍ သင်သည် အင်တာနက်ပေါ်မှ ဈေးဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ၀န်ဆောင်မှု အတွက်ငွေပေးချေခြင်း၊ တို့အတွက် MyanPay ကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့က လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ (MyanPay Username နှင့် Password) တို့ကို မေးမြန်းမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် MyanPay မှ သင်၏ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် Pin Code (သို့) One Time Password ဖြင့် အတည်ပြုချက်ရယူမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဤအချက်အလက်များကို MyanPay မှတဆင့် ရယူမည်ဖြစ်သည်။ တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း ပြုမပြုကို ကြည့်ရှုရန်သင်၏ Internet Address (IP address) သို့မဟုတ် MyanPay account ကို အသုံးပြုရန် သင်သုံးသော လမ်းကြောင်းကိုလည်း ရယူထားမည်ဖြစ်သည်။
Website သို့ဝင်ရောက် ကြည့်ရူသည့် သတင်းအချက်အလက်များ
MyanPay Web site ထဲသို့ သင်ဝင်ရောက်လာခြင်း၊ ထွက်သွားခြင်းပြုလုပ်ပါက World Wide Web communication ကြောင့် သင်ကြည့်ရှုခဲ့သည့် သို့မဟုတ် ကြည့်ရှုလိမ့်မည့် Web address များကို ကျွန်ုပ်တို့က အလိုအလျောက် သိရှိနေပေမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် သင် MyanPay Web site ထဲရှိနေခိုက် မည်သည့်စာမျက်နှာကို ကြည့်ရှုနေသည်၊ မည်သည့် browser အမျိုးအစားကို သုံးသည်၊ အချိန်မည်မျှကြာကြာ သုံးသည်များကို စိစစ်နေမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဖောက်သည်များ၏ ကြိုက်နှစ်သက်မှုများကို ပိုမိုသိရှိရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုနှင့် ဖောက်သည်များ၏ MyanPay နှင့် ပတ်သက်သော သဘောထားတို့ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန် ကြိုးစားရန်အတွက်သာ ဤ information များကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့်သည် သင် MyanPay Website ထဲသို့ မ၀င်မီကြည့်ရှုခဲ့သည့် သို့မဟုတ် MyanPay Website ထဲမှ ထွက်ခွာပြီးနောက် ကြည့်ရှုလိမ့်မည့် Website များကို စုံစမ်းနေမည် မဟုတ်ပေ။
အကယ်၍သင်သည် MyanPay Website ထဲသို့ တူညီသော Computer နှင့် brower ကိုသုံး၍ ပြန်ဝင်လာပါက သင်သည် MyanPay customer တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း မှတ်မိစေရန် ကျွန်ပ်တို့မှ သင်၏ computer ဆီသို့ ပေးပို့မည့် data များပါဝင်သည် files လေးများကို “Cookies” ဟုခေါ်သည်။ သင်၏ e-mail address နှင့် password ကို ရိုက်ထည့်၍ MyanPay account ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာပါက ကျွန်ုပ်တို့က သင့် Computer ထဲသို့ session cookie” ကိုပေးပို့မည်။ ဤ cookies က တချိန်ထဲတွင် သင်က ကျွန်ုပ်တို့ site ထဲရှိ စာမျက်နှာများ စွာကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေစဉ်တွင် သင့်အားမှတ်မိစေမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် သင်၏ Password ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရိုက်နေစရာ မလိုတော့ပေ။ သင်ထွက်သွားလျှင်(သို့) သင့် browser ကို ပိတ်လိုက်လျှင် ဤ cookies မှာ မည်သည့် သက်ရောက်မှုမှ မရှိပဲ ပြီးဆုံးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ e-mail address ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Sign-in form တွင် ပြသရန် ကြာရှည်ခံသော cookies များကိုလည်း အသုံးပြုပါသည်။ ဤ နည်းဖြင့် သင့်အနေနှင့် သင်၏ MyanPay account သို့ ဝင်ရောက်သော အချိန်တိုင်း e-mail address ကိုပြန်ရိုက်နေရန် လိုတော့မည် မဟုတ်ပေ။ ထို့ပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် cookies ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ထပ်ဆင့် ညွှန်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ထပ်မံအသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies files များမှာ လျှို့ဝှက်ထားသောကြောင့် MyanPay ဖြင့်သာလျှင် သင်၏ e-mail address မှ အခြားအချက်အလက်များကို အဓိပ္ပါယ် ပြန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် MyanPay တွင် တရားဝင် စာရင်းသွင်းထားသည်ဟု သေချာသော အသုံးပြုသူကိုသာလျှင် cookies information ကိုဖြန့်ဝေပေးမည် ဖြစ်သည်။
သင်၏ e-mail များ၊ faxs များကဲ့သို့ စာများပေးပို့ပါက သင် account ၏ မှတ်တမ်းများထဲမှ information ကို ရယူမည် ဖြစ်သည်။ custormer ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အခြားသော စာပေးစာယူကိစ္စများကိုလဲ MyanPay မှတဆင့်သာ သင်နှင့်ဆောင်ရွက် ကြမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤမှတ်တမ်းများကို customer ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများ တိုင်းတာရန်၊ တိုးတက်အောင်ကြိုးစားရန်နှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော လိမ်လည်လှည့်စားမှုများ နှင့် user သဘော တူညီချက်များ ချိုးဖောက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တို့အတွက် ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။
လူဦးရေ ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ကောက်ခံရန်နှင့် အသုံးပြုသူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် လိုအပ်ချက်များကို သတ်မှတ်ရန်ရည်ရွယ်၍ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသော မေးခွန်းများနှင့် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်များကို အချိန်နှင့်အမျှ ပြုလုပ်နေသည်။ ကောက်ခံထားသော အချက်အလက်များ အသုံးပြုမှုကို သုံးသပ်ချက်တွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြ ထားမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွင် အသုံးပြုသူများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူလိုပါက အသုံးပြုသူများအား ဦးစွာအသိပေးပြီး မှသာလျှင် ကောက်ယူမည်ဖြစ်သည်။
3. သတင်းအချက်အလက်များနှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုမှု များကိုထုတ်ဖော်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောက်ခံရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များကို အောက်ပါ အစဉ်လိုက်တိုင်းအသုံးပြုသည်။
1. သင့်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုများ ထောက်ပံ့ရန်
2. Customer ဝန်ဆောင်မှုများ ထောက်ပံ့ရန်
3. Special features (သို့) products များ တောင်းဆိုမှုကို လက်ခံရန် သင်၏ စွမ်းရည်ကို သုံးသပ်ရန်
4. ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန် နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးမြင့်ရန် အသုံးပြုသည်။ "ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ user များ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို customer ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ရသော ဝန်ထမ်းများကိုသာ ပေးပါသည်။"
MyanPay Customers နှင့် Third Parties များကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်း
အကယ်၍ သင်သည် MyanPay အား e-commerce အတွက်ရည်ရွယ်၍ သုံးသည်ဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့မှ သင်ပေးထားသော Website address (URL) နှင့် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များ ကိုလည်း အခြား MyanPay customer များသို့ ပြသမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သင်၏ Bank account နံပါတ်နှင့် အခြား ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အချက်များကိုမူ MyanPay မှ တဆင့် ငွေပေး/ ငွေယူလုပ်သော မည်သူကိုမဆို မည်သည့်အခါမှ သိရှိစေမည်မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် သမ္မန်စာ(သို့) အခြား ဥပဒေရေးရာကိစ္စများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်လာပါကမှု ချွင်းချက်အနေဖြင့် ဖော်ထုတ်ပြသမည် ဖြစ်သည်။
MyanPay က သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အခြားသူသို့ရောင်းချခြင်း ဌားရမ်းခြင်းများ ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ MyanPay မှ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို အခြားသူများနှင့် အောက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်အခြေအနေများ (သို့) အထက်တွင် ဖော်ပြပြီးသော အခြေအနေမှ MyanPay customers များ (သို့) သင်၏ ခွင့်ပြုချက်မှ လွဲ၍ ခွဲဝေ အသုံးပြုမည် မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စုစည်းထားသော သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများပေးသော companies များ (သို့) ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာတွင် ဆက်စပ် လုပ်ကိုင်နေသော အခြားငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကိုသာ ထုတ်ဖော် ပြသပါသည်။ ဤ Companies သည် သင်၏ သဘော တူညီချက်(သို့)အခြားသော အသုံးပြုမှုအတွက် သင်၏ခွင့်ပြုချက်မျိုးမှ လွဲ၍ MyanPay နှင့် ဆက်စပ်သော ထုတ်ကုန်များ(သို့)ဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်ရန်မှတပါး သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းအား တားမြစ်ထားသော ဥပဒေရေးရာ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် လျို့ဝှက် သဘောတူညီမှုများ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပြုလုပ်ထားသော companies များဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် လိမ်လည်မှုများကို သို့ အခြားတရားဝင် လုပ်ဆောင်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါက(သို့) ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အသုံးပြုမှုသဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းအား စုံစမ်းရပါက သတင်းအချက်အလက်များကို ဖော်ထုတ်မည်ဖြစ်သည်။ အဓိက ဆိုရသော် အခြားတဖက်မှ လိမ်ညာလှည့်စားမှု ပြုလုပ်နေကြောင်းတွေရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ တောင်းဆိုထားသော User အား လိမ်ညာသောသူ၏ သတင်းအချက်အလက်(bank account (သို့)bank card မပါ) ကိုပေးမည် ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မန်စာကဲ့သို့ ဥပဒေနှင့် ဆက်စပ်နေသော အမိန့်စာများအတွက်မူ information ကိုဖော်ပြမည်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် information ကို သင်၏ ကိုယ်စားလှယ်(သို့)ဥပဒေရေးရာ ကိုယ်စားလှယ်တို့ကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမည်ဖြစ်သည်။
MyanPay Customers နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် တောင်းဆိုသော ဝန်ဆောင်မှုများ ဖြည့်စည်းရန်အတွက် ပုံမှန် နည်းလမ်းဖြစ်သော e-mail ကို သုံး၍ user များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖုန်းဖြင့်လည်း customer များ၏ မကျေနပ်မှုများ ဖြေရှင်းရန်(သို့) မသင်္ကာစရာကောင်းသော လုပ်ငန်းစဉ်များ စုံစမ်းရန်ကိစ္စတို့ကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ e-mail address အား သင်၏ MyanPay account ဖွင့်ခြင်းအားအတည်ပြုရန်၊ MyanPay မှတဆင့် သင့်ငွေပေး၊ ငွေယူခြင်းတို့ကြောင့် သတိပေးစာတို့ကို သင့်ထံပေးပို့ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော အရေးကြီးသည့် အပြောင်းအလဲများသတင်းကို သင့်ဆီပေးပို့ရန်နှင့် သတိပေးစာနှင့် အခြားဥပဒေအရ လိုအပ်သော ထုတ်ဖော်ချက်များပေးပို့ရန် အသုံးပြုပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် user များသည် ဤဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ။သို့သော် ၎င်းတို့သည် သတင်းများကို လက်ခံယူနိုင်ခြင်းသာရှိ၍ ဆင့်ပွားဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုလုပ်နိုင်ပေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် IP address, browser type's နှင့် access times တို့အား လမ်းကြောင်းများ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာရန် site ကို စီမံခန့်ခွဲရန်၊ site ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို တိုးတက်စေရန်နှင့် များပြားလှသောလူမှုရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို တစုတစည်းထဲ အသုံးပြုနိုင်ရေး အတွက် စုဆောင်းရန်တို့အတွက် အသုံးပြုသည်။
4. သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေး
MyanPay သည် သင်၏ customer အချက်အလက်များကို မြင့်မားလှသော လုံခြုံရေးအခြေအနေများနှင့် ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် တာဝန်ယူထားရပေသည်။ သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များ လိုအပ်သော ဝန်ထမ်းများကိုပင် ကျွန်ုပ်တို့မှ သင်၏ ကိုယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို သုံးစွဲခြင်းအား တင်းကြပ်စွာ ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဖက်ဖက်မှ စိတ်ချရသော လုံခြုံရေးများနှင့် သင့်၏ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံရေး စနစ်အား အစဉ်အမြဲ စစ်ဆေးလျှက်ရှိသကဲသို့ ပြင်ပ companies နှင့်လဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုံခြုံရေးစနစ်များကို စစ်ဆေးရန် စာချုပ်ကိုလည်း ချုပ်ဆိုထားပါသည်။ MyanPay လုံခြုံရေးနှင့် ဆောင်ရွက်မှုများ ပတ်သက်သော အသေးစိတ် အချက်အလက် များသိရှိလိုပါက MyanPay Security Centre သို့ လာရောက်ခဲ့ပါ။ သင်၏ MyanPay account လုံခြုံရေးမှာ သင်၏ MyanPay Password အား သင်မှကာကွယ်ခြင်း အပေါ်၌ မူတည်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အား MyanPay Password ကိုမည်သူနှင့်မျှ မျှဝေမသုံးစွဲရန် ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ပေသည်။ MyanPay မှ တာဝန်ရှိသူများက သင်၏ Password ကိုသင့်အား မည်သည့်အခါမျှ မေးလိမ့်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် မည်သည့် email (သို့) ဆက်သွယ်ရေး နည်းလမ်းဖြင့် သင်၏ Password အား တောင်းခံလာခြင်းသည် တရားမဝင်ပေ။ သင်သည် သင်၏ MyanPay Password အားအခြားသူနှင့် မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်မဆို(အခြားသူမှ သင့်အား account aggregature ကဲ့သို့ တပ်ဆင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးမည်ဟု ကတိပြုခြင်း အပါအဝင်) မျှဝေသုံးစွဲပါက ၎င်းမှာ သင်၏ account နှင့် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ သင်၏ Password အသုံးပြုခြင်းအပေါ် အရေးယူပါက သင်၌သာ တာဝန်ရှိပေမည်။ အကယ်၍ တစုံတယောက်က သင်၏ Password ကို ရယူသုံးစွဲနေသည်ဟု ယူဆပါက www.myanpay.com.mm ရှိသင်၏ account သို့ချက်ချင်းဝင်ရောက်ရန် သင်၏ Password နှင့် Profile setting တို့ကို ပြောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဆီကိုလည်း ချက်ချင်း ဆက်သွယ်ရပေမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ သင်ပေးထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ထိုအချက်လက်များ(သို့) MyanPay account ၏ settings တွင်ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မည်သည့် အချိန်တွင်မဆို MyanPay Web site မှ သင်၏ account ထဲသို့ ဝင်ရောက်၍ Profile page မှတဆင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သင်၏ account ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ customer ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဆက်သွယ်၍လည်း ပိတ်နိုင်ပါသည်။အကယ်၍ ပိတ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ database ထဲတွင် သင်၏ account ပိတ်ပြီးကြောင်း မှတ်သားထားလိမ့်မည်။ သို့သော် သင့် account ၏ information ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ database ထဲတွင် ဆက်လက်သိမ်းဆည်းထားမည် ဖြစ်သည်။ ဤသို့သိမ်းဆည်းသည်မှာ လိမ်လည်သော သူတစ်ယောက်သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ရှောင်ကျဉ်ရန်အတွက် account အဟောင်းအား ပိတ်ပြီး account အသစ်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းကို တားဆီးရန်အတွက် လိုအပ်လှပေသည်။ သို့သော် သင်၏ account ကို ပိတ်လိုက်ပါက ဥပဒေရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်နှင့် လိမ်ညာမှုမှ ကာကွယ်ရန်မှလွဲ၍ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို အသုံးပြုတော့မည် မဟုတ်ပေ။
6.	MyanPay နှင့်ဆက်သွယ်ရန်
သင်၌ ဤ Privacy statement, or User Agreement တို့နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစရာများ ရှိပါက သင်သည် MyanPay ၏ ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်သော (၀၁-၅၅၅၄၆၆၊ ၀၁-၅၅၅၉၁၁) သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်၍ လည်းကောင်း၊ privacy@myanpay.com.mm (သို့) Contact Us page မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့ e-mail ပို့ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။